Dalladaha Waxbarashada oo qaadacay Imtixaan mideysan oo dowladdu wadday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dalladaha Waxbarashada oo qaadacay Imtixaan mideysan oo dowladdu wadday
Mareeg.com: Shir jaraa’id oo ay Muqdisho ku qabteen Dalladaha Waxbarashada Ahliga ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayey ku sheegeen ineysan suuragl aheyn in xilligaan la qaado imtixaan mideysan oo ay waddo wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Wasaarada Waxbarashada Xukumadda Soomaaliya ayaa dhawaanahan sheegeysay in dalka lagu qabanayo Imtixaan mideysan oo loo qabanayo Fasalka 4-aad ee dugsiyada sare.
Haddaba dalladaha Waxbarashada ayaa maanta Muqdisho ka sheegay ineysan suuragal aheyn in dalka laga qaado imtixaan mideysan oo u sababeeyey amaankja oo xun, manhajn mideysan oo aan jirin iyo imtixaanka oo aan la wada gaarsiin karin dalka oo dhan.
Aweys Sheikh Maxamed oo u hadlay Daladaha ayaa sheegay in Imtixaanka 2014-2015 uusan dalka si mideysan uga dhici karin.
Alshabaab ayaa horay ugu hanjabay iney tilaabo ka qaadi doonaan ciddii ka qeybgasha imtixaanka ay waddo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaan weli wax jawaab ah ka bixin go’aanka ay maanta gaareen dalladaha waxbarashada.
Dalladaha Waxbarashada ayaa qaadi raba Imtixaanka Shahaadiga ah ee fasallada Form4 9-ka bishaan May oo ku beegan maalinta sabtida ah ee soo socota.
Shir shalay Muqdisho ku dhex maray wasaaradda Waxbarashada iyo Guddiga Arrimaha Bulshada ee baarlamaanka ayaa lagu sheegay in la isla gartay in ardayda Form4-ka laga qaado imtixaan mideysan.